Maamulka Magaalada Qabridahare oo Dardar Xoogan Galiyay Fursadaha Shaqo-abuurka Shacabka Dhanka Dhagaxa Qoran(Cobble-Stone). - Cakaara News
Qabridahare(CakaaraNews) Khamiis Nov,28,2013.waxaa magaalada qabridahar si xawli ah uga socda Dadaalo xoogan oo ay maamulka magaalada qabridahar ugu jiraan sidii loo sii dardargalin lahaa kor uqaadida Nolosha bulshada iyo abuurida fursado shaqo si ay Qayb muhiima uga noqdaan Horumarka balaadhan ee ay xukuumadu ka wado.
Maamulka Magaalada qabridahar ayaa iyagoo ka duulaya Qorshayaasha xukuumada DDSI ee ku wajahan Dardargalinta arimaha horumarka iyo shaqo abuurka bulshada ee m/m/qbari-dahare ayaa ay si xawli ah uga dhaqaajiyeen Horumarita wadooyinka Dhagaxa Qoran la goglo iyo uga faaiidaynta Bulshada Fursadaha Shaqo loogu abuurayo.
shacabka qabridahare ayaa ka dib markii loo abuuray Fursado shaqo laguna gaashaamay aqoon iyo xirfado ay ku shaqaystaan sida Tababarada la xidhiidha barashada Qorida iyo Goglida Dhagaxa qoran(Cobble-Stone) iyadoona loo sameeyay Nidaam sharciyaysan oo iskaashatooyin loogu abuurayo taasoo wax wayn ka tartay Heerka Noloshooda iyo Dhigaalkoodaba.
Mar aanu kula xidhiidhnay mayorka Maamulka Magaalada Qabridahare Ku-meelgaadhka ah Maanta Mudane Cabdi Xasan ayaa uu noo sheegay In Hawlaha Balaadhinta Wadooyinka ee Magaalada Qabridahare Dhexmara ay si xoogan u socdaan iyadoona ay ka faaiidaysanayaan Iskaashatooyinka Magaalada ee Dhagaxa Qoran Gogla wadooyinka(Cobble-stone).
Qandaraasyada Noocan ah ayaa ay hada ka hor Shirkado laga leeyahay Meelo ka baxsan Gobolka Qoraxay oo shaqsi leeyhay ay qaadan jireen balse hada shacabka magaalada oo tababaro la xidhiidha Qorista iyo Goglida dhagaxa Qoran wadooyinka ayaa ay xukuumadu siisay si ay Nolosha Shacabku kor ugu soo kacdo ayuu yidhi Mayorku.